IMF Inoti Zimbabwe Haisati Yaita Chibvumirano neWorld Bank nezveKubhadhara Zvikwereti Zvayo
Chikunguru 08, 2017
Bhanga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti Zimbabwe haisati yanyorerana chibvumirano neWorld Bank chekuti yobhadhara sei chikwereti chayo chinosvika bhiriyoni imwe chete.
IMF inoti Zimbabwe ikadawo kushandisa mari iri munyika kubhadhara chikwereti ichi zvinogona kupa kuti nyika itopinda mumatambudziko makukutu kuti zvinozokonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation.
Zimbabwe haina kuzombowana chikwereti chimwe kubva kuIMF neWorld Bank kubva muna 1999 apo yakatanga kutatarika kubhadhara zvikwereti.
Mumashoko kuvatori venhau neChishanu mushure memusangano nevakuru vebhanga iri, kana kuti executive board, IMF yakati hapana chibvumirano chati chanyoreranwa pakati peZimbabwe nevamwe vekunze vose vakakweretesa Zimbabwe mari.
IMF inoti inodawo kuti Ziombabwe ivandudze zvinhu munyaya dzezvehupfumi. Muna Kubvumbi, gurukota rinoona nezvehupfumi VaPatrick Chinamasa vakati Zimbabwe yainge yatenderana neWorld Bank neAfrica Development Bank pahurongwa hwekubhadhara mari asi izvi zvinenge zvakona n’anga murapwa achida.
Chikwereti cheZimbabwe kuAfDB chinosvika madhora mamiriyoni mazana matanhatu.